लाडोलाई उनको मुखमा हालेर मजाले चुस्न लगाए - Naughty Nepali
Home » Nepali Sex Stories » लाडोलाई उनको मुखमा हालेर मजाले चुस्न लगाए
एक्कासी टिन्न टिन्न्न तिनिटिन गरी फोन को रिङ्टोन् घन्कियो, पख त एक्छिन को रहेछ ? फोन उठाउँ भनी मेलिना ले टेबल बाट आफ्नो मोबाईल उठाइ अनी मलाई सुश्मा को फोन।।।।। चिस चिस्स गर्दै चोर्नी औंला आफ्नो ओठ्मा रखेर मलाई चुप लाग्न भनिन। त्यस पछी म पनि चुप लागेर मेलिना को कान मा आएर कान ठाडो पारेर कुरा सुनें । सुश्मा ले भनिन ल म पाँच मिनट म त्यहाँ अाईपुग्छु तर किन हो यसरी अकस्मात् बोलाएकी, जिन भएनी यहाँ अाईज न पहिले अनी बताउन्छु क्या! प्लिज, मेलिना ले भनिन। ओके ओके ल म हिंडें ।
कसैले ढोकमा ढंग ढंग गरेको आवाज आयो अनी मेलिना ले पक्कै पनि यो त सुश्मा नै हुनुपर्छ भनी ढोका खोल्न गैइन् । नभन्दै सुश्मा पो रहेछिन । अनी मेलिना ले भनी – अघि तँ पाँच मिनट मा यहाँ अाईपुग्छु भनेकी थीस त के भयो? तँ दस मिनट भाईसक्यो, तँ किन पाँच मिनट ढिला नि ! ट्राफिक जाम मा परेँ त्यसैले नि, तँलाई त थाहा नै छ नि आज्कल को ट्राफिक, सुश्मा ले जवाफफ दीईँन। अनी आँखाँ को ईशाराले सुश्मले मलाई देखाउदै मेलिना सँग सोधिन् । मेरो दाई हो अर्थात मेरो कान्छो अंकल को छोरा हो क्या बुझिस, मेलिनाले मलाई देखाउदै भनिंन। त्यस पछि मैले ” हाई।।।।।” भने, अनी उनले पनि “हाई।।।।।” भनिंन। बस्न त्यहाँ भनी सोफा तिर औंलाले देखाउदै भनीन् मेलिनाले। सुश्मा सोफा मा गएर बसिन् उनले टाईट जिन्स को पेन्ट र टाईट टीसर्ट लगाएकी थिन । उनको मज्जाको दुध को पोको अलग्गै छुट्टीएका थीए। उनको शरीरको बनावट् नै छर्लङ छुट्टीएको थीयो। म चाहिं त्यही हेर्दै थुक निल्ल थालेँ । ओेई तैले यसरी अकस्मात् मलाई किन यहाँ बोलएकी नि? अघी भन्छु भनेको होइन? सुश्मा ले प्रश्न गरिन। त्यसै तलाई भेट्न मन लागेर बोलएको नि, किन हाम्ले अब तँलाई बोलाउन पनि नहुने भयो कि क्या हो हँ? मेलिनाले जवाफ दीयिन । अा।।। त्यसो होइन के, मात्रै किन हो भनेको क्या। ए ठिकै छ साँच्ची नै मैले तिमीलाई भेट्न बोलाएको हो । ल मेरो दाई सँग गफ गर्दै बस म कफि बनाएर लिएर आउन्छु नि ल। सुश्मा ले हुन्छ भनिन। अनी मेलिना किचेन तिर लागिन् ।
मैले उनी सँग गफ गर्ने बाटो खोजें अनी थाहा नभए जसरी “तिम्रो नाम के हो?” भनी सोधें । सुश्मा, उनले भनीन् । लास्ट नेम चाहिं के हो नि? ” सेर्पा ” अनी हजुरको नाम के हो नि? ” , गोविन गूरुङ “, मैले भने। अा।।। फेरी मैले सोधें, तिमी पनि मेलिना सँगै पढ्छौ हो? हजुर, मेलिना र म एउटै क्लास अनी एउटै सेक्सन मा पढ्छौं । मेलिना त बोर्ड टपर हो हाम्रो स्कुलको एन्ड ” सि इज माइ बेस्ट फ्रेन्ड। सि इज सो फ्रेन्डली, ब्रिलिअन्ट् एन्ड को-अपरेटिव् टु । आइ लभ हर वेरी मच् । त्यसैले त म उस्को एक कल मा एकै चोटि यहाँ आएकी । म सधैं उनी लाई सहयोग गर्न जती बेला पनि रेडी हुन्छु ।” सुश्मा ले जवाफ दीईन् । सुश्मा ले ईंग्लिश फुराएको देखेर म त दाङ परेर हेरिरहे उनको मुखमा मात्रै। अनी दाई ह्जुर लाई के भयो? सुश्मा ले सोधीन् । म झसँग भएर होइन केही होइन, तिम्रो ईंग्लिश देखेर अचम्मित् भएको नि भनी प्रसम्सा गरिदीईएको त उनी खुशी हुँदै “थ्यान्कु दादा” भन्दै अनी हजुर चाँही कती क्लास म पढ्नु हुन्छ नि? सोधीन् । म ११ क्लास म पढ्दै छु। यस्पाली पोखर बाट एस् एल सि दीएर यहाँ कलेज पढ्न भनी आएको। अ।।। हो र, अनी हजुरको पढाई कस्तो चल्दै छ त। एकदम राम्रो चल्दै छ। त्यस पछि मैले मेलिना लाई केही बाहाना बनाएर एक्छिन बाहिर जान आग्रह गर्दै एउटा मेसेज पठाए उन को मोबाईल मा ।
मेलिना ले कफि लिएर अाईन् अनी टेबल मा रखिदीईएर, मलाई आन्टी ले खै किन हो छिटो यहाँ आउन भन्नुभएको छ त्यसैले तिमीहरु यो कफि खाँदै गफ गर्दै गर्नु म एक्छिन मा अाईहाल्छु । मैले नाटक पारेर सोधेँ किन र, के भयो र? तिमीलाई एक्कासी मेरो ममी ले बोलाउनु भएको। खोइ मलाई त थाहा भएन, ल तिमीहरु बस्दै गर म एक्छिन मा आउन्छु, हुन्छ सुश्मा? ह्म्म।।। ठिकै छ ।।। ओके। तर छिटो अाईज नि ल। ल ल म जती सक्दो छिटो आउन्छु भन्दै मेलिना ले ढोका ढेपेर गैइन अनी फेरी हामी एक अर्का तिर हेर्दै हास्न थालेउँ । हजुर किन हास्नु भएको? उनले लजालु स्वोर मा सोधिन् । मैले पनि छिल्लिदै भने तिमी चाँही किन हाँसेको नि? ए म त त्यसै हांसेको । अनी मैले भने टि.भी हेर्ने हो। हुन्छ हेरौं न त उन्ले भनिन् । त्यस पछि मैले टि.भी खोले। कस्तो सन्जोग “स्टार गोल्ड” च्यानल मा “अशिक”, अ सेक्सी मुभि दीईरहेको रहेछ। अनी मैले भने यही फिल्म हेर्ने हुन्छ। उनले पनि हुन्छ भनिन् । हिरो हिरोईन अन्गालो हालेको, किस गरेको अनी यस्तै यस्तै काउकुती अनी इमोसन गराउने सिन हरु दीईरहेको थीयो। केही बेर टि.भी हेरे पछी मैले आउ न यहाँ बेड मा सुतेर हेर, सोफा मा बस्दा बस्दा खुट्टा पट्यार नै लागिसक्यो होला। लाज मान्दै होइन यहीँ ठीक छ भनीन्, फेरी मैले धेरै कर गरे पछि उनले अन्तत बेड मा आउन राजी भैइन् । उनी बेड मा अाईन् र लजाईन, अनी अफ्ट्यारो मान्दै छेउ मा अलक्क सुतेर टि.भी हेर्न थालिन् । उनको धड्कन तेज् हुनुको साथै अनुहार पुरै रातो भएको थियो। यो देखेर मेरो भाई जुर्मुर्याउन थालयो ।
त्यस पछि बिस्तारै म उनी भए तिर आउन थालेँ । अनी उनी सँग छोएर सुते। उनी त झन पुरा रातो हुँदै एक टक ले टि.भी तिर हेर्न थालिन्। फेरी मैले मेरो दहिने हातले उनको काँध मा हल्का सुम्सुम्याउन थालेको त उनी उता पट्टी कोल्टे परीदीईन । आगोमा घ्यु थपे जस्तो भयो। तेसैले मैले बिस्तारै उनको धाड् तिर हातले सुम्सुम्याउन्दै उनको चाक को पुट्ठा सम्म पुगेँ । अनी बिस्तारौ देब्रे हात ले धाड तिर मुसार्दै दहिने हात लाई उनको गला तिर पुराएको त उनले आँखा चिम्लीईन् । यो देखेर मैले बिस्तारै दहिने हात लाई उन्को दुध तिर झारेँ, अनी बिस्तारै त्यो टाईट टीसर्ट बहिर बाट नै उन्को दुध सुम्सुम्याउन थालेँ । उनी त ईीस्स्स्स्।।।।।स्स्स्स्स्स्स्।ईीस्स्स्स्।।।।।स्स्स्स्स्स्स्।ईीस्स्स्स्।।।।।स्स्स्स्स्स्स्। आवाज निकाल्न थालिन्। मेरो लाडो दाउरो जस्तो पुरा कडा र ठाडो भैसकेको थियो त्यसैले मैले मेरो लाडोले उनको ढाडमा घोची दिन्थें । अनी उनको दुध मोल्न थालेँ । बिस्तारै उनलाई मेरो मुख तिर फर्काएँ र च्वप्पै उन्को मुखमा मेरो मुख जोडेर किस् गर्दै दाहिने हात ले दुध मोल्दै देब्रे हात ले चाँही उनको शरीर सुम्सुम्याउन थालेँ । यसरी बिस्तारै मैले मेरो देब्रे हात लाई उनको पेन्ट सम्म पुर्याये । उनको मुखमा किस् गर्दिऐ, दाहिने हातले दुध मोल्दै देब्रे हातले बिस्तारै उनको टीसर्ट माथि सारेर एकदम काउकुती लाग्ने पाराले बिस्तारै उनको नाईटो चलाऊन थालेँ, कहिले काही चाँही चोर्नी औंला लाई बिस्तारै उनको पेन्ट भित्र छिराउने प्रयास गर्थे तर उनको त्यो टाईट पेन्ट को करण ले गर्दा असफल हुन्थेँ । यो क्रम करीब दस् मिनट जती रहयो होला ।
अब उनी पुरै इमोसन मा आएको जस्तो लाग्यो त्यसैले मैले बिस्तारै उन्को टीसर्ट उतरि दिए। अब उनी मात्रै ब्रा र पेन्ट मा थीईन्। अनी फेरी मैले बिस्तारै ब्रा बहिर बाट नै दाहिने हातले मज्जाले दुध माढ्दै देब्रे हातले उनको पेन्ट को टाँक खोलि दिए । त्यस पछि बिस्तारै मुख बाट किस् गर्दै उनको नाईटो सम्म पुगेँ । फेरी किस् गर्दै उनको खुट्टाको औंला हरु किस् गर्दै स्वाट्टै उनको पेन्ट उतरि दिएं । अब त उनी मात्रै ब्रा र पेन्टी मा मात्रै थीईन्। उन्को मुख बाट अनयासै उम्म्म्म्म्।।।।।।ीईीस्स्स्स्।।।।ाअा।।।ह्ह्हुउुउुउुउु।।।ह्हीएीए।।।।।।।।स्स्स्स जस्ता आवाज निस्कि रहेका थिए। फेरी मैले बिस्तारै उनको ब्रा पनि खोलि दिएं र उनको मुखमा किस् गर्दै एउटा हातले दुध मोल्दै अर्को हातको औंला पेन्टी बाहिर बाट नै उनको त्यो कलिलो पुती सुम्सुम्याउन थालेँ । उनको पुती त पुरा भिजेको रहेछ। अनी मैले बिस्तारै उनको पेन्टी भित्र औंला चलाऊन थालेँ । उनी अाअह्हाअी।।।ुउुउ आएीएे।।ैयाअ।।ूओू।।।।दुध्यूओू।।।। जस्ता आवाज निकाल्दै थीईन्। मैले चाहिं त्यो आवाजलाई इग्नोर गर्दै चोर्नी औंला लाई उनको पुतिको प्वाल मा छिराउने कोशीस गरेँ तर छिर्दै छिरेन । उनी दुख्यो भनेर रुँदै थीईन् । त्यस पछि मैले उनको पेन्टी पनि खोलि दिएं । मैले पनि छिटो छिटो आफ्नो पुरै कपडा खोलेँ । अब हामी दुबै जना जन्म जात नग्न अवस्थामा थियौ । अनी मैले मेरो लाडो लाई उनको पुतिको ओरि परी रगड्न थालेँ । त्यस पछि उनको पुतिबाट निस्केको पानी सबै मैले खाई दिएं । मेरो जिब्रोले बिस्तारै उनको पुती रगड्न थालेँ । यसो गर्दा उनलाई बडो मजा आएछ क्यारे। म पनि तिम्रो लाडो खन्छु नि। भनिन। त्यस पछि मैले उनको मुखमा मेरो लाडो लाई हाली दिएं । उनले त भोकाएकी शिम्हिनी जसरी मेरो लाडो चुस्न थालिन् । मलाई पनि यसो गर्दा खुब मजा अाईरहेको थियो अनी मैले भने अब मेरो भाईलाई तिम्रो तल्लो मुखमा हलिदेउन त? उनले हुन्छ छिटो छिराउनु होस, मेरो पुती च्याती दिनुहोस् न प्लिज। मेरो पुतिको सिल तोडिदिनुहोस्न। भन्दै उम्म्म्।।।एओू।।।ह्म्म्म्।।।।।ज्जूऊ।।।।।यम्म्म्मीई।।।।जस्त आवाज निकाल्दै छिटो छिटो मेरो राजा भन्न थालिन् ।
त्यस पछि मैले पनि हत्त न पत्त मेरो लाडो लाई उनको पुतिमा छिराए तर उनको पुतिले त्यत्रो पानी फ्यक्दा पनि कत्ती पनि छिरेन । मेरो लाडो नछिरे पछी मैले मेरो लाडो लाई फेरी उनको मुखमा हालेर मजाले चुस्न लगाएं अनी मजाले मेरो लाडोमा तेल दलें र फेरी उनको पुतिमा छिराउने प्रयास गरे । यस पटक भने अलिकती छिरेको के थियो । उनी त ऐय।।। मरे ममी भन्दै रुन थालिन् । हुन पनि उनको पुती एकदम टाईट थियो। उनको पुती बाट रगत बग्न थालेको थियो । मलाई दया लागेर आउन थाल्यो । फेरी सोचें यस्तो टाईट पुतिमा आफ्नो लाडो छिराउने अबसर अर्को पटक पाईन्छ या पाईदैन । यस्तो मौका पाएको बेला म लाडो लाई उनको पुती भित्र पुरै नछिराईकन त कहाँँ छोड्नु नि भनी उनको मुखमा मेरो मुख जोडेर उनलाई चुप गराएं ।फेरी मैले मेरो लाडोले मज्जाले धक्का दिएको त मेरो लाडो पुरै उनको पुती भित्र छिर्यो । उनको पुती बाट ह्वाल्ह्वाल्ती रगत बगिरहेको थियो । उनले शरीर हल्लाउन्दै चल्दै थीईन्, उनी रुन पनि सक्दिन थीईन् किनकी मेरो मुख्ले उनको मुख मज्जाले थुनिएको थियो । शायद उनलाई धेरै खपिनस्क्नु दुखेको थियो । म पनि के कम, पुरै निर्दयी भएर पुरा दना दन दिन थाले। मैले मजाले मेरो लाडो लाई उनको पुती भित्र बाहिर गर्न थालेँ । यसरी कारीब आधा घण्टा जती लाडो लाई उनको पुती भित्र बाहिर गरे पछि उनको पुतिबाट रगत पनि बग्न छोड्यो । अब त उनलाई पनि दुख्न छाडे जस्तो थियो किनकी उनले पनि तल बाट मलाई साथ दिन थालेकी थिन् । त्यस पछि उनको मुख बाट मेरो मुख हटायेँ । उन्को दुध चुस्दै दना दन दिन थाले । उनी उुउु।।।।।।ूओू।।वोव्व्।।।।क्य।।।म्माज्जाअ।।।।अझ भित्र।।। मजाले।।।छिटो।।।छिटो।।।मेरो राजा।।।मेरो पुतिको प्वाल ठुलो पारीदेउ।।।।।।भनी अन्यासै बर्बराउन्दै थीईन् । एसरी कारीब ४५ मिनट जती चिके पछी हामी दुबै जना सिथिल भएउ । अनी उनी मेरो लाडो लाई मुखमा हालेर, मैले उनको पुती चाट्दै लम्पसार परेर सुत्एउ । कति बेला हामी निदाउन पुगे छौं पत्तै भएन ।
मेलिना आएर पनि सुश्माको दुध सुम्सुम्यौन्दै मेरो लाडो चुसिरहेकी रहिछिन । मेलिनाको यो स्पर्सले हामी दुबै जना बिउँझीएउ । अनी मेलिनाले भनिन् – अब बुझेउ किन मैले तिमीलाई एक्कासी फोन गरेर यहाँ बोलएको । म्म्म्म्म् ।। तिमिले पनि गरिसक्एउ मेलिना ? या, आइ कल यू टू टु ह्याव् फन् ।।।।। ल ल छिटो अब आन्टी पनि आउने बेला भयो अब छिटो छिटो यो रगत लागेको कपडा धुनु पर्छ भनी मेलिना र सुशमा बाथ्रुम मा तन्ना धुन गये अनी म चाही टि.भी हेर्न थाले।
lado mukh ma halera chusna lagaye, दुध सुम्सुम्यौन्दै मेरो लाडो चुसि, मेरो लाडो लाई उनको पुतिको